Events - Myanmar’s First Brewery: Burbrit Craft Beer
ဘီယာစက်ရုံTasting roomTaproomOther Outlets
If you are looking foravenue to organize an event, Burbrit Taproom might be the solution for you.We provide professional services with flexible packages for your Opening Ceremony, Product Launching, Meeting and Conference, Corporate/Private Party, Musical Event, Charity Event, Wedding Dinner and Birthday Party.
Located in central Yangon, Burbrit Taproom has beautiful outdoor garden seating and spacious air-conditioned indoor that can accommodate up to 250 people. Amenities include stage, audio system, big LED screen, tables and chairs, decorations and ample parking space.
The following are photos of past events held at Burbrit Taproom for your reference.
Burbrit Taproom မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Sunshine Mobile Night Market
ဒီလိုစည်းစည်းကားကားနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလမ်းတွေ၊ Corporate Event ၊ Product Launching Event ၊ Birthday Party ၊ Private Eventနဲ့ Charity Event တွေကို ကျင်းပချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Burbrit Taproom မှာ ကြိုတင်စာရင်းပေးပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် သင့်ရဲ့ Event တွေကို ပုံဖော်လို့ ရနေပါပီ ဆိုတာ သတင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်။
The Zero ရဲ့ ‘Back to Yangon’ ဂီတပွဲကို Burbrit Taproom မှာ ကျင်းပ
The Zero ရဲ့ ‘Back to Yangon’ ဂီတပွဲကို Burbrit Taproom မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ အပီဟဲ ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလဲပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ The Zero ရဲ့ ပရိတ်သတ် ၂၀၀ ခန့် တက်ရောက် အားပေးခဲ့ပြီး သီချင်းတွေ ပြိုင်တူသီဆိုအားပေးရင်း လှပတဲ့ ညနေခင်းတခုကို အတူတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။
Burbrit ရဲ့ ရှယ်ဘီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နဂါးနီဘီယာအား Asia Beer Championship မှ Chairman's Selection ဆုပေးအပ်
Burbrit ရဲ့ ရှယ်ဘီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နဂါးနီဘီယာအား Asia Beer Championship မှ Chairman's Selection ဆုကို ပေးအပ်ချီးမြင့်ခဲ့ပြီး စိစစ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဘီယာအရည်အသွေး အရသာ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု မှန်ကန်ပြည့်ဝရမယ်ဆိုတဲ့ စံနှုန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကနာမည်ကြီး ဒိုင်တွေက ရွေးချယ်စိစစ်ခဲ့ရာတွင် Burbrit က ယခုလို အာရှတွင် အသိမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။
ASK Hospitality Vocational School မှ ကျောင်းသား/ သူများ Burbrit သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာ
ASK Hospitality Vocational School မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ Burbrit သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့သည့် အမှတ်တရပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
Eat Meet Sweet Private Party
Burbrit ချစ်သူတွေအတွက် ပွဲကြီးတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့နာမည်ကြီး အဆိုတော် ဘီလီလေးရယ်၊ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုလေးက သီချင်းတွေဆိုမယ် ပျော်မယ် ကမယ် ဟစ်မယ့် Eat Meet Sweet Private Party ပွဲကြီးတစ်ခုမို့ လာရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
Burbrit Taproom တြင္ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Grape Vine Wine Distribution ရဲ့ မီဒီယာမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား
Corporate Event ၊ Product Launching Event ၊ Birthday Party ၊ Private Eventနဲ႔ Charity Event ေတြကို က်င္းပခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔Burbrit Taproom မွာ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးျပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ Event ေတြကို ပံုေဖာ္လုိ့ ရေနပါပီ။
Beer News Here
© 2022 burbrit craft beer